दुई सातामा दुई छलाङ - समसामयिक - नेपाल
दुई सातामा दुई छलाङ
बाबुराम भट्टराई वामदेखि लोकतान्त्रिक गठबन्धनसम्म
वाम गठबन्धनका लागि १७ असो जमा सहभागिता जनाएका पूर्वप्रधानमन्त्री तथा नयाँ शक्ति पार्टीका संयोजक बाबुराम भट्टराईले त्यसको १० दिनभित्रै २७ असोजमा गठबन्धनबाट बाहिरिएको घोषणा गर्न बाध्य हुनुपर्‍यो । रोचक के भने वाम गठबन्धनमा उनको आगमन जति आकस्मिक देखियो, बहिर्गमन पनि एकाएक भयो । एमाले–माओवादी गठबन्धनमा भट्टराईको प्रवेश र बहिर्गमनको अन्तर्यभित्र के–के खेल भए/थिए त ?
ओलीको स्वागत, प्रचण्डको छिर्के
भट्टराईकै शब्दमा गठबन्धनमा उनको सहभागिता आकस्मिकजस्तो देखिए पनि यथार्थ त्यसो होइन । खासमा गठबन्धनको प्रमुख सूत्रधारमध्ये एक आफू नै भएको भट्टराईको दाबी छ । ३१ वैशाखमा पहिलो चरणको स्थानीय निर्वाचन हुनुअघिदेखि नै भट्टराईको नयाँ शक्ति र उपेन्द्र यादव नेतृत्वको संघीय समाजवादी फोरमबीच एकताको प्रयास भएको थियो । उनीहरूबीच यसरी छलफल हुँदा दुई शक्तिबीच मात्र किन ? गठबन्धनका लागि माओवादीसँग पनि छलफल चलाउने सल्लाह भयो । अनि, यादव, भट्टराई र प्रचण्डबीच चुनावी तालमेलका विषयमा कुराकानी अघि बढ्यो । छलफलमा प्रचण्डले तालमेलका लागि एमालेसँग पनि कुराकानी भइरहेको सूचना चुहाए । प्रचण्डले नै ‘गठबन्धनको जानकारी कसैलाई पनि दिनु हुँदैन’ भनेका थिए । उनले अरूलाई जानकारी गराएमा भाँडिन्छ भनेपछि ओली, प्रचण्ड, भट्टराई र यादवबीच मात्रै गोप्य बैठक भयो । यसपछि छलफलको जिम्मा प्रचण्ड र ओलीलाई दिइयो ।
कतिसम्म भने १२ असोजमा प्रचण्डले ‘ एमालेसँगको छलफल सकारात्मक रूपमा अघि बढेको र सबै एक भएर निर्वाचनमा जानुपर्ने’ भनेका थिए । तालमेल गर्दा एमाले, माओवादीका अतिरिक्त संघीय फोरमबाट उपेन्द्र यादव र अशोक राई, नयाँ शक्तिबाट भट्टराईसमेत गरी १० जनाको संयन्त्र बनाउने सहमति पनि भएको थियो । तर, फेरि १३ असोजमा प्रचण्डले ‘एमालेसँग नहुने भयो । हामी तीन पार्टीबीच मात्र तालमेल गरौँ’ भने । जसका लागि १४ असोजको बिहान प्रचण्ड, भट्टराई र यादव तीन नेताहरूको भेटघाट भयो । तालमेलको खाका बनाउने जिम्मा यादवलाई दिइयो । र, १६ असोजमा त्यसलाई निष्कर्षमा पुर्‍याउने भन्दै उनीहरू छुट्टिए ।
स्रोतका अनुसार गडबडी यहीँ भयो । यी तीन नेता छुट्टिएपछि एमाले नेताहरू ओली, वामदेव गौतम, विष्णु पौडेल र माओवादी केन्द्रबाट प्रचण्ड, जनार्दन शर्माको बैठक भयो । यही बैठकपछि दुई पार्टीबीच मात्र गठबन्धन गर्ने सहमति बन्यो । उनीहरूले खाकासमेत तयार गरे । यसपछि ‘१६ असोजमा निष्कर्षमा पुगौँला’ भनेका प्रचण्डले भट्टराईलाई फोन सम्पर्क नै गरेनन् । यादव र भट्टराई भने सम्पर्कमै थिए । तर, १६ असोजमा भट्टराई र एमाले उप–महासचिव विष्णु पौडेलबीच टेलिफोनमा कुराकानी भयो । यस बेलासम्म एमाले–माओवादी केन्द्रबीच तालमेल हुँदै एकतासम्म जाने सहमतिका धेरै कुरा सार्वजनिक भइसकेका थिए ।
१७ असोज दिउँसो २ बजे ओलीले भट्टराईलाई आफ्नो निवास बालकोटमा निम्त्याए । जहाँ ओलीले उनलाई तालमेलमा सहभागी हुन आग्रह गरे । भट्टराई मोटामोटी सहमत नै थिए । अनि, त्यहीँबाट भट्टराईले प्रचण्डलाई फोन गरे । ‘ ओलीले मान्दैनन्,’ प्रचण्डको भनाइ थियो । ‘ ओलीजी सहमत हुनुहुन्छ । उहाँ र मसँगै छौँ ।’ भट्टराईले भनेका थिए । भट्टराईको यो अभिव्यक्ति सुनेपछि प्रचण्डले भने, ‘ए ल त्यसो भए ठीक छ । भेट गरी थप सल्लाह गरौँ ।’ यसपछि एमाले संसदीय दलको कार्यालय सिंहदरबारमा थप छलफल गर्ने सहमति भयो । ओली र भट्टराई बालकोटबाट सिंहदरबार आए । यस बेलासम्म दुई पार्टीबीच मात्र कार्यक्रम गर्ने गरी ब्यानर तयार पारिएको थियो । राष्ट्रिय सभागृहमा सार्वजनिक गर्ने बुँदाहरू पनि त्यही अनुसार बनाइएको थियो । भट्टराई पनि सहभागी हुने भएपछि ब्यानरदेखि बुँदासम्म नयाँ बनाइयो ।
बुझ्न कठिन भएन, ओली चाहना र ढिपीका कारण मात्र बाबुराम गठबन्धनभित्र छिरेका थिए । गठबन्धनबारे जानकार एमालेका एक स्थायी समिति सदस्यका अनुसार माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्ड, नेता नारायणकाजी श्रेष्ठले भट्टराईलाई उक्त गठबन्धनभित्र ल्याउन चाहेकै थिएनन् । गठबन्धनमा भट्टराईसमेत सामेल हुने जानकारी पाएपछि श्रेष्ठले त कतिसम्म अडान लिएका थिए भने, भट्टराईलाई अर्को दिन ल्याऔँ, आज एमाले–माओवादी दुई दलबीच मात्र तालमेलको घोषणा गरौँ । भट्टराईलाई ‘ आइसोलेसन’मा राख्ने नियत नै सही, प्रचण्ड सहमत थिए । गठबन्धन घोषणाको भोलिपल्ट एमाले, माओवादी केन्द्र र नयाँ शक्तिका नेताहरूबीच बैठक बस्यो । एमाले महासचिव ईश्वर पोखरेलको संयोजकत्वमा निर्वाचन क्षेत्र र सिट बाँडफाँट कार्यदल बनाइयो । जहाँ नयाँ शक्तिबाट गंगा श्रेष्ठ तोकिए । तर, श्रेष्ठलाई एक दिनभन्दा बैठकमा बोलाइएन ।
वाम गठबन्धनमा भट्टराईको नयाँ शक्तिले पाँच प्रतिशत सिट मागेको थियो । त्यो भनेको प्रतिनिधिसभाको प्रत्यक्षतर्फ आट सिट हुन्छ । ती थिए, गोरखा–२, सप्तरी–१ वा २, रौतहट–२, कपिलवस्तु–१, मकवानपुर–१ वा २, रसुवा, खोटाङ र कैलाली–३ वा ४ । प्रदेशसभामा पनि त्यही अनुसार बाँडफाँट गर्न उनीहरूको माग थियो । सुरुमा आठ सिट प्रस्ताव गरेको भए पनि छलफल चल्दै जाँदा चार वा पाँच सिट दिएको भए नयाँ शक्ति सहमत हुन तयार थियो । भट्टराईको प्रस्तावप्रति एमाले नेताहरूमध्ये वामदेव गौतमबाहेक सकारात्मक नै थिए । तर, सुरुआती दिनदेखि नै माओवादी नेताहरू यसरी प्रस्तुत भए कि नयाँ शक्तिलाई एक सिटभन्दा नदिने, त्यो पनि भट्टराईले लड्छु भनेको गोरखा–२ त चिताउनै नहुने अडान लिए । माओवादीहरू नरम र लचक ढंगले प्रस्तुत भएका हुन्थे भने भट्टराई गोरखा–२ बाट चुनाव नलड्न राजी हुन पनि सक्थे । तर, गठबन्धनबाट भट्टराईलाई निकालेरै छाड्ने माओवादीको नियत बुझेपछि ‘ मर्नु नै छ भने किन झुकेर मर्नु’ भनेझैँ गोरखा–२ कै ढिपीमा अडिएका थिए, भट्टराई ।
एमाले उपाध्यक्ष वामदेव गौतम नै माओवादी केन्द्रसँग मिलेर गठबन्धनबाट आफूहरूलाई बाहिर निकाल्न सहयोगी बनेको नयाँ शक्तिका नेताहरूको बुझाइ छ । माओवादीबाट सिट बाँडफाँट कार्यदलमा रहेका नेताहरू नयाँ शक्तिप्रति अनुदार ढंगले प्रस्तुत भएपछि भट्टराईले प्रचण्डलाई समेत भेटेका थिए । तर, भेटमा प्रचण्डले ‘मैले साथीहरूलाई मनाउन सकिनँ । तपार्इं र नारायणकाजी गोरखा–२ बाटै लड्नूस्’ भनेको स्रोत बताउँछ । प्रचण्डको यो अभिव्यक्तिलाई भट्टराईले ‘गठबन्धनमा स्थान छैन, बाहिरिनूस्’ भनेको रूपमा नबुझ्ने कुरै भएन । गठबन्धन गरेर पनि श्रेष्ठसँगै प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्ने हो भने किन त्यहाँ बसिरहने भनेर भट्टराईले गठबन्धनबाट बाहिरिएको घोषणा गरे ।
गठबन्धनबाट बाहिरिएपछि ‘गोरखामा वाम तालमेललाई देखाइदिने र मुलुकको एक महत्त्वपूर्ण पात्र भएकाले आफूलाई कसैले पाखा लगाउन नसक्ने’ भन्दै भट्टराई कांग्रेससँग सहकार्य गर्न पुगेका थिए, जसका लागि आईएस्सी पढ्दा नेविसंघका अगुवाहरूसँग निकट भएको उनको पृष्ठभूमिले सहज बनाएको थियो । त्यसो त भट्टराईजतिका पात्रलाई संसद् बाहिर राख्न हुन्न भन्ने प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेललगायत कांग्रेस नेताहरूको सदाशयताले पनि निकै हदसम्म काम गरेको थियो । साथै, भट्टराईलाई आफ्नो पक्षमा ल्याउन सके माओवादीले आफ्नो किल्ला दाबी गरिरहेको गोरखामा उसलाई बढार्न सकिने कांग्रेसको मूल्यांकन छ । भट्टराई वाम गठबन्धनबाट बाहिरिएसँगै कांग्रेसका दोस्रो तहका नेताहरूले उनलाई प्रधानमन्त्री देउवाले भेट्न चाहेको सुनाएका थिए । यसपछि भट्टराईले प्रधानमन्त्री देउवा, रामचन्द्र पौडेल, गोरखाकै कांग्रेस नेता चीनकाजी श्रेष्ठलाई सम्पर्क गरेका थिए ।
पहिलो भेटमै देउवा र पौडेल भट्टराईलाई गोरखा–२ छाड्न सकारात्मक भए । अर्को भेटपछि गोरखा–१ मा नयाँ शक्तिले कांग्रेसलाई र २ मा कांग्रेसले नयाँ शक्तिलाई सहयोग गर्ने समझदारीले औपचारिकता पाएको थियो । सुरुआती दिनमा भट्टराई आफ्नो व्यक्तित्वका कारण कोहीसँग तालमेल नगरे पनि निर्वाचन सहजै जित्न सकिने ठम्याइमा थिए । तर, स्थानीय निर्वाचन परिणामले व्यक्तित्वले मात्र जित्न नसकिने निष्कर्षमा पुगे । त्यसैले उनी वाम तालमेलमा सहभागी हुन पुगेका थिए । त्यहाँ आफ्नो अपमान भएको महसुस गरेपछि लोकतान्त्रिक गठबन्धनमा प्रवेश गरेका थिए । अहिले माओवादी केन्द्रका नेताहरूचाहिँ भट्टराईलाई आगामी दिनमा कम्युनिस्ट विरोधीका रूपमा करार गर्ने ध्याउन्नमा छन् । र, यही सोचका साथ आगामी दिनमा पनि भट्टराईलाई गठबन्धनमा पुन: प्रवेश नदिने तयारीमा छन् ।
वाम तालमेलबाट भट्टराईको बहिर्गमनसँगै प्रतिनिधिसभाका लागि पहिलो चरणमा हुने ३७ स्थानको निर्वाचनमध्ये सर्वाधिक चासोको क्षेत्र गोरखा–२ बनेको छ । किनभने, भट्टराई प्रधानमन्त्री हुँदा श्रेष्ठ त्यही मन्त्रिपरिषद्मा उपप्रधान र परराष्ट्रमन्त्री थिए । अहिले यी दुई नेताबीचमै त्यहाँ प्रतिस्पर्धा भइरहेको छ । भट्टराईले आफ्नो बौद्धिक पृष्ठभूमि, अर्थमन्त्री, प्रधानमन्त्री हुँदा दीर्घकालीन महत्त्व राख्ने योजना पारेका कारण कांग्रेस, एमाले, माओवादी सबैले सहानुभूतिको मत दिने आकलन गरेका छन् । श्रेष्ठचाहिँ उक्त निर्वाचन क्षेत्रलाई वाम पकडको क्षेत्र मान्छन् । नेपालसँगको कुराकानीमा भट्टराईले वाम तालमेलको सूत्रधार आफू भएको दाबी त गरे । तर, आफू गठबन्धनबाट बाहिरिनुमा चाहिँ एमाले–माओवादी केन्द्रमा रहेको पुरानै जड कम्युनिस्ट ढर्रालाई दोष दिए । “मैले वाम गठबन्धन/एकता गर्ने हो भने पुरानो ढर्राको कम्युनिस्ट सोच त्याग्नुपर्छ भनेको थिएँ,” उनी भन्छन्, “तर, उहाँहरू पुरातनवादी सोचबाट माथि उठ्न सक्नुभएन । त्यसैले गठबन्धनमा सहभागी भइरहनुको अर्थ नदेखेर बाहिरिएको हुँ ।”